Hedgehog - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
Hedgehog (Atelerix frontalis)
I-Hedgehogs zizintlu ezincinci, ezibonakaliswe ngobuso babo obuqingqiweyo kunye neentlobo ezimfutshane, ezibukhali ezifihla iintambo kunye nomva njengokhuselo kubalimi. Intloko kunye nobude bomzimba ngu-200mm kunye nomsila omfutshane we-20mm.
I-Hedgehogs isondla kwiinambuzane ezinjengezibhungane, i-termite, iinkumbi kunye ne-slugs. Basenokuphanga amajelo amancinci, amaqanda amancinci kunye neenkukhu, amaqatha kunye nezilwanyana. Ngaphandle kwefungi kunye nemifuno yemifuno zidla ngezinye izihlandlo ekudleni kwazo. Kubonakala ukuba abaxhomekeke kumanzi akhululekileyo.
Ixesha lokuzalisa liya kusuka ngo-Oktobha ukuya ku-Epreli. Inzala yabo iphakanyiswe kwindawo yokukhusela yamadlelo okanye imingxube enamagqabi anomileyo kunye namatye. Ixesha lokuthoba lihlala kwiiveki ezintlanu ukuya ezintandathu kwaye iilitha ziyahluka ukusuka kwenye ukuya kwisithoba. Abancinci abangenabunwele nabangaboniyo ekuzalweni kunye neendlebe zabo zivaliwe.
Ngaphantsi kwesikhumba sentsha esandula kuzalwa, izihluma eziqhekezayo zivele zibonakala. Izihluma ezinamahlombe zivela emva kosuku olunye kunye neentlobo zentsana zithatha indawo kunye neentsiba ezivuthiweyo phakathi kweeveki ezine ukuya ezintandathu emva kokuzalwa. Abancinane banconywa malunga neveki ezintlanu.